Ihe igwe CNC, nke makwaara dika ihe eji emeputa ihe eji eme ihe. Dị ka aha ahụ na-egosi, usoro niile sitere na nbudata, ịkpụ, mkpọda olulu na idobe efere ahụ ga-emecha otu aga. Ọ na-edochi mmepụta na nhazi ya nke ọma. Ya mere, kedu uru dị ukwuu na usoro nhazi nke igwe mkpuchi CNC maka akụrụngwa na-emepụta ngwa ụlọ? Taa Jinan JCUT CNC ụlọ ọrụ akụrụngwa na-ewere ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị dịka ọmụmaatụ ịme ka ị kọwaara gị ya n'ụzọ zuru ezu.
1. Igwe igwe egbutu CNC nwere ike imeziwanye uru nke efere. Ejiri komputa mezue ulo a. Dabere na arịa ụlọ e mepụtara, enwere ike ịnweta data nke bọọdụ ahụ ozugbo, mgbe ahụ enwere ike ibelata ma hazie bọọdụ ahụ site na sọftụwịa ụdị kachasị mma. Ojiji itinye n'ọrụ na-adị elu nke ukwuu, ruo 95%; Igwe eji egbutu ya na-eji igwe egwe osisi egbue, nke nwere ike itughari uzo obula ma belata udiri ahu puru iche. A ga-egbutu tebụl ọdịnala ọdịnala ahụ ruo na njedebe, ọnụego mpempe akwụkwọ na-adị oke ala. Nna-ukwu nke tebụl slide ahụ na-ebupụta tụọ na ịkpụ nke teepu ahụ dabere na eserese ahụ.
2. Ngwunye igwe CNC na-echekwa ego ọrụ. Enwere ike iji otu onye rụọ ọrụ nke ejiri ngwa ngwa emeputa ngwa ngwa ụlọ ọrụ wee jiri ya rụọ ọrụ, ma ọ bụrụ na ejiri eriri mmachi na - agbagharị agbatị, onye ọrụ nwere ike rụọ ọrụ ma jiri ya na belata ya ruo na belata ya. Tebụl slide ahụ hụrụ ma ọ dịkarịa ala ndị ọrụ abụọ iji rụọ ọrụ, ọ dịkarịa ala otu nna ukwu na-eduzi onye na-amụ ọrụ, yana ike ọrụ dị elu, na njikwa ndị ọrụ nwekwara ọrụ siri ike. Dị ka mbubata ụgbọ mmiri ụbọchị, ọ gaghị enwe ike iru atọ n'ime atọ mepere emepe CNC.
3. Ọsọ nhazi nke igwe na-egbutu CNC adịghị ka nke iji ya tụnyere tebụl slide ahụ. Usoro imepụta ngwa ngwa ụlọ ọrụ akpaka bụ usoro na-aga n’ihu na anaghị akwụsị akwụsị, na ntanetị CNC akpaka ịkpụcha; ebe a na-ahụgharị tebụl hụrụ ka a ga-akwagharị ma kwusi, a na-akwagharịkwa bọọdụ ahụ, nke bụ igbu oge na ọrụ. Ọ bụrụ na-ahazi n’ụzọ na-adịghị mma, ọnụego njehie ahụ dị elu nke ukwuu.
4. Ebe a na-arụ ọrụ nke igwe ngbanye CNC dị ezigbo mma. Ngwaọrụ uzu siri ike nke igwe ihe eji egbutu ya na igwe ihe eji eme ka ihe ndi mmadu megharia aru; dị ka a na-ekwu maka ya, uzuzu nke tebụl slide ahụ dị nnukwu nnukwu.
5. Igwe na-egbutu CNC na-akwado ụdị ọrụ na nhazi nke nzuzu, kọmputa niile gbakọtara, na ọdịda efu na njehie efu. Wa ahụ dị mfe. Ọ bụrụ na onye ọrụ anyị nke ọzụzụ ọzụzụ dị mfe, enwere ike iji ya rụọ ọrụ, ọ dịkwa nchebe ma ghara ịdị njọ. Tebụl slide ahụ na-eji ntụnye akwụkwọ ntuziaka iji zere njehie dị iche iche. Tebụl slide ahụ dị ize ndụ ma dịtụ mma. Nwere ike ịkpata mmerụ ahụ.
Na mkpokọta, ma ọ sitere na ọnụahịa nhazi, ma ọ bụ njikwa nhazi, teknụzụ nhazi nke igwe igwe CNC na-ejikọbeghị ọnụ. Nke a bụkwa mgbọrọgwụ nke igwe na - egbutu CNC dị ugbu a nke ndị ahịa nwere nnukwu mmasị na ya.